Emma ny efitra hifampiresahana - izao Tontolo izao ny Lahatsary Mampiaraka
Emma ny efitra hifampiresahana — izao Tontolo izao ny Lahatsary Mampiaraka
Emma ny efitra hifampiresahana dia tantara mitohy amin’ny fahitalavitra ho an’ny ankizy sy ny tanora, izay naka sary any Aostralia, any Alemaina sy Singapore. Ny tantara novokarin’ny atsimon’i Kintana fialam-Boly ao anatin’ny fiaraha-miasa amin’ny NDR, Efijery Aostralia sy ny Aostraliana fantsona Sivy Tambajotra.
Ny volana novambra. Janoary avy amin’ny ankizy ny fantsona Mampiaraka USA fandaharana. Taona iray taorian’ny Emma sy ny Mpiara-dia toy ny fifanakalozana mpianatra avy any Singapore, dia tokony ho zava-bitany, ny roa taorian’ny dihy tao amin’ny sekoly fety be indray ao an-tranony firenena ny Alemana sy Aostralia.
Ny namana Jackie indray ao Singapore
Indrindra fa Emma, ny nisokatra dia sarotra, satria izy no nianjera-pitia Jackie ny rahalahiny, Josh. Ny fihetseham-po dia mifototra amin’ny»valifaty», izay no tsy miaiky, tany am-piandohana, fa na ny toy izany. Josh dia manome ny telo vavy amin’ny horonan-tsary amin’ny USB-tsy Hiala amin’ny ny tsy miankina chat room, tamin’ny finday PIN ny fidirana. Zara raha rehefa avy nanandrana izany, lasa adala daholo ny fitaovana elektronika ny telo ary ny tsirairay amin’izy ireo mahazo ny herinaratra. Fotoana elaela taty aoriana, ny ankizivavy dia mahita ny tenany eo hafahafa, foana izao tontolo izao indray. Rehefa mino ianao, amin’ny voalohany, fa ny herinaratra namono azy ireo telo ianao, dia mahatsapa fa ao anatin’ny tontolon’ny Aterineto tratra. Ny zazavavy, dia hahita ny fomba ahafahanao miverina miditra sasany finday TSIMATRA an-trano sy ny fomba hafa izany fomba izany ao an-tranony firenena fitsidihana. Mila mitandrina ny efitra amin’ny chat, fa ny zava-miafina. Miara, ny telo traikefa eo amin’ny tsirairay avy an-trano ny firenena ny Namana maro niainany ary aza tsy tonga saina fa ny fiainana toy izany ny zava-miafina dia tsy mora. Ankoatra izany, Emma, izay madly-pitia Jackie ny rahalahiny, Josh, te la réunion. Noho izany ianareo, dia manambara ny zava-miafina ny amin’ny chat room, satria Josh mino fa i Emma ao Hamburg, Alemaina. Toy ny Jackie in Hamburg mianatra Nicholas dia namana ny Emma, ny roa raiki-pitia sy ny zava-drehetra ho lasa sarotra kokoa. Mpiara-monina amin’ny toeram-piompiana soavaly ary, fa Dan manampy avy raha ny fianakaviana no tsy fotoana. Mpiara-tsy misy, fa tahaka ny kilalaon’afo eo amin’izy ireo. Koa, Jackie, Emma sy ny Mpiara-dia ny fahaizana mampiasa ny sehatry ny Aterineto mba handeha ihany koa, na eo amin’ny Firenena Dihy Fifaninanam-tany Singapore, ny anjara sy ny hanandrana, na dia eo aza ny fotoana ny fiovana, mba hihaona tsy tapaka ao Singapore sy ny fiaran-dalamby ny dihy mpampianatra Michelle ho an’ny dihy ny fifaninanana.»Emmas efitra hifampiresahana»avy ao amin’ny volana janoary ka hatramin’ny volana aogositra, irery tao amin’ny tany am-boalohany toerana telo firenena: Germany (Hamburg), Aostralia (Sydney) sy Singapore
← Ahoana avy ny tovovavy tsirairay aho hihaona te hanambady ve aho
Ny fiarahana amin'ny aterineto tsy misy fisoratana anarana →